Notokanana androany 28 may 2021 ny tranobe ny serasera sy ny kolontsaina etsy amin'ny araben'ny fahaleovantena izay nampitondraina ny anarana hoe "Masova 501". Raha tsiahivina dia ny sabotsy 9 novambra 2019 no nametrahana ny vato fototra an'ity tranobe ity. Tonga nitokana sy nanome voninahitra izany ny minisitra ny serasera sy ny kolontsaina Lalatiana Andriatongarivo sy ireo tompon'andraiki-panjakana eto an-toerana.
Nandritra ny lahateny nataony no nanambarany fa ny kirizy ara-pahasalmana no nahatara ny famitana ny asa fanamboarana, kanefa vita soamatsara izy ankehitriny. Manana toerana miendrika ho azy ny mpanao gazety sy ny mpanankanto eto Toamasina manombok'izao hoy Ramatoa minisitra. Nampahafantariny fa ity tranobe aty amin'ny faritra Atsinanana ity no faharoa notokanana taorian'ny tany Atsiranana, ary isaky ny renivoham-paritany no hananganana ny tranobe ny serasera sy ny kolontsaina. Amin'izao fotoana izao dia efa mandeha ihany koa ny fanamboarana ny trano miisa 9 hafa any amin'ireo faritra rehetra mbola tsy manana an'izany.
Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fandaharan'asa izay nifanarahan'ny Filohan'ny Repoblika tamin'ny vahoaka izay nifidy azy ny fananganana ny foton-drafitr'asa isan-karazany toy itony ary manatanteraka ny veliranon'ny filoham-pirenena ny minisitra ao anatin'ny fitondram-panjakana. Tsy adino ary anisan'ny laharam-pahamehana ho an'ny fitondram-panjakana ny fampandrosoana ny faritra Atsinanana hoy Ramatoa Lalatiana Andriatongarivo Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina.
(220) S.Lantomalala : 28-05-2021 - 12:00